Odisha Weekend ထွက်ပြေးဖို့ | တနင်္ဂနွေခရီးစဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဦးတည်ရာ
ဒါဟာကျနော်တို့ရက်ထဲမှာ9မှ5အလုပ်လုပ်သည့်အခါအထူးသဖြင့်သွားရောက်ကာဒီဇိုင်းမှအစဉ်မပြတ်ခဲယဉ်းပါတယ်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့နင်္ဂနွေကော? ယခုနှစ်ထွက် 52 တနင်္ဂနွေရှိပါတယ်။ သင်မည်သို့သူတို့ကိုဖြုန်းဖို့သွားမည်နည်း ဝေးသူတို့သို့သော်အခြားမည်သည့်နေရာစျေးဝယ်စင်တာသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံကိုသွားဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးထင်သောမြေပေါ်တွင်အခြေခံအားဖြင့်ခရီးသွားလာခြင်းမှ bashful သူကိုမြောက်မြားစွာတစ်ဦးချင်းစီ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အသက်ရှင်ဖို့အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုမပြုပါ! သင့်ရဲ့တနင်္ဂနွေအားကောင်းရန်အများဆုံးရိုးရှင်းတဲ့ချဉ်းကပ်သဲကျောက်စရစ် Tours မှအတူ Odisha Weekend ထွက်ပြေးဖို့ရန် drive ကိုလေ့လာရေးခရီးသွားရတတ်၏။
လူကြိုက်များသောတနင်္ဂနွေခရီးသွားလုပ်ငန်းအစက်အပြောက်လက်ခံအဆိုပါကြော့ခရီးစဉ် packages များနိုင်ငံခြားနှင့်ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်အကြား hit တစ်ဟောက်ဖြစ်ထွက်လှည့်ပါပြီ။ အကောင့်ထဲသို့ရက်သတ္တပတ်အပန်းဖြေ၏အဆုံး၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးစီးပွားများကိုယူနိုင်ရန်ဝတ္ထုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုစိတ်အားထက်သန်စာလုံးပေါင်းစေရန်သဲကျောက်စရစ်အာဏာအပ်နှင်းထားပြီးဒါ့အပြင်စားသုံးသူသစ္စာရှိမှုနှင့်အလေးမွတျအတှကျအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသမိုင်းမှတ်တိုင်များကိုဆည်းပူးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် In-depth ကိုအကဲဖြတ်နှင့်အတူကြံစည်စုအစည်း Bhubaneswar, Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika နှင့်ပိုပြီးပတ်ဝိုင်း။
အဆိုပါ Odisha Weekend ထွက်ပြေးဖို့အထူး, ပျားရည်ဆမ်းခရီးခရီးစဉ်, ဝိညာဏ & အမွေအနှစ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်သဘာဝနိူးများအတွက် Eco ခရီးစဉ်နှင့်အတူစွန့်စားခရီးစဉ်ထွင်းထုနေကြသည်။
လူအပေါင်းတို့သည်ခရီးစဉ်များနှင့် packages များများအတွက်နေရာထိုင်ခင်းအပေါငျးတို့သခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများမှာနံနက်စာပါဝင်သည်။ ၏အများဆုံးခေတ်သစ်စင်းကို ဇိမ်ခံကား & နည်းပြ အတွေ့အကြုံနှင့်လေ့ကျင့်ကားမောင်းသမားနှင့်အတူဖောက်သည်များ၏ command ကိုမှာရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်စိတ်ကို-မှုတ်သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူကြော့ဟိုတယ်များ Odisha အတွက်ထိပ်တန်းခရီးသွားဧည့်ခရီးစဉ်များအားလုံးအတွက်ဖောက်သည်များလက်ခံပေးနိုင်ရန်စီစဉ်နေကြသည်။
Bhubaneswar Amazing ခရီးစဉ်
Bhubaneswar-Konark-Puri Tour Package ကို